Faah-faahin cusub oo ku saabsan Dilkii galabta Muqdisho loogu geystay Jeneraal Yuusuf Cagaey | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin cusub oo ku saabsan Dilkii galabta Muqdisho loogu geystay Jeneraal Yuusuf...
Muqdisho (Halqaran.com) – Faah-faahin cusub ayaa ka soo baxeysa dilkii gelinkii dambe maanta Jeneraal Yuusuf Cali Qasaaye (Yuuuf Cagey) loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
Ninkan dilka gaystay ayaa waxaa albaabka guriga ka furtay gabar shaqaale ahayd, taasoo dilka ka dib la sheegay in ay goobtaasi ka carartay.
Ciidanka Xoogga Dalka oo hoygaasi ka ag-dhawaa ayaa waxay dilka ka dib ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ninkii wax dilay, kaasoo iminka lagu hayo Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga.
Ciidamada Booliska ee Degmada Hodan oo dalbaday in dembiilaha lagu soo wareejiyo ayaa waxaa ka biyo diiday Ciidanka Xoogga Dalka, iyagoona ballanqaaday inay sharciga horkeeni doonaan.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo Saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo Maamulka Gobolka Banaadir ay ka soo saareen dilka Jeneraal Cagey loogu gaystay Magaalada Muqdisho.
Faahfaahin ka soo baxday dilkii Jeneraal Yuusuf Cagey
iyo ninkii dilay oo la qabtay